Akhriso: Sharraxaada doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ee shacabka aysan codeyn doonin | Radio Hormuud
Akhriso: Sharraxaada doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ee shacabka aysan codeyn doonin
Doorashada muddo-dhaafka ah ee Madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah ka dhaceysa Teendhada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho, taas oo soo afmeeri doonta 15 bilood oo uu taagnaa khilaafka doorashada.
Si kastaba ha ahaatee, soo gabo-gabeynta doorashooyinka waa tallaabo wanaagsan, maadaama dalka ay ka jiraan amni darro, abaaro iyo barnaamijka deyn cafinta oo qarka u saaran in uu fashilmo. Dhammaan arrimahaasi ayaa loo sababeynayaa in hoggaamiyaasha dalka iyo kuwa mucaaradka ay ku mashquuleen geedi-socodka muranka doorashada dalka.
Doorasho noocee ah ayaa dhici doonta Axadda?
Soomaaliya waxaa mar kale ka dhici doonta doorasho dadban. Markii hore qorshuhu wuxuu ahaa in markii ugu horreysay muddo 50 sano ah la qabto doorasho qof iyo cod ah, balse taasi wey dhici weyday markii la garwaaqsaday xaqiiqooyinka amni, sharci iyo mida maaliyadeed.
Dalka Soomaaliya ayaa u baahan dastuur damaanad qaadaya hannaan sharci oo ku saabsan doorashada iyo codeynta. Taas markii la gaari waayay ayaa beddelkeeda hoggaamiyayaasha Soomaalida waxaa ay go’aamiyeen in dib loogu noqdo doorasho dadban.
Baarlamaannada maamul-gobolleedyada ayaa soo doortay 54 senator oo uu ka koobanyahay Aqalka Sare ee baarlamaanka, kaddiba Senetarrada ayaa iska dhex doortay guddoomiye iyo labadiisa ku-xigeen.
Xildhibaannada Aqalka Hoose ama Golaha Shacabka waxaa soo doortay ergo kala joogta 11 deegaan doorasho- tusaale ahaan maamul-gobolleed kasta waxaa lagu qabtay doorasho ka dhacday labo deegaan doorasho, halka caasimada Muqdisho ay ka dhacday doorashada beelaha Banaadiriga iyo doorashada Gobollada-Waqooyi.
Golaha Shacabka ayaa ka booban 275 xildhibaan, waxaana xildhibaan kasta soo doortay 101 ergo oo ah beesha leh kursiga.
Xildhibaannadaasi ayaa iska dhex doortay guddoomiye iyo labdiisa ku-xigeen. Labada Aqal ee baarlamaanka ayaa kaddib yeesha kulamo gaar-gaar ah oo ay ku magacaabeen xildhibaanno kamid noqonaya guddiga isku-dhafka ee soo diyaarinta doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya.
Yaa u tartamaya doorashada Madaxweynaha?
Guddiga isku-dhafka ee soo diyaarinta doorashada Madaxweynaha ayaa diiwaan-gelliyay 39 musharrax oo u tartamayay doorashada Madaxweynaha. Mid kamid ah shuruudaha musharraxa ayaa ah in uu bixiyo $40,000 (Afartan kun oo dollar).
Inta badan musharraxiinta waa dad ku cusub siyaasadda, laakiin waxaa ku jira madaxweynayaal hore sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo madaxweynaha hadda tallada haya ee Maxamed Cabdullahi Farmaajo. Musharraxiinta sidoo kale waxaa kamid ah Ra’iisul Wasaare hore Xasan Cali Kheyre iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Thaabid Cabdi Maxamed.
Xildhibaannada labada aqal ayaa Axadda yeelan doona kulan wadajir ah oo ay ku dooran doonaan Madaxweynaha afarta sanno ee soo socota hoggaamin doona Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Maalinta Codbixinta, 329 xildhibaan oo ka tirsan Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare oo mid kasta leh hal cod ayaa dhiiban doona codkiisa.
Musharrax ayaa ku guuleysan kara doorasho haddii uu helo 75 boqolkiiba codadka wareegga koowaad, taas oo meesha ka saari doonta in wareegyo kale la aado. Si kastaba ha ahaatee, tani weligeed kama aysan dhicin Soomaaliya oo doorashooyin kasta waxaa la isla gaari jiray ilaa wareegga saddexaad oo ah kan ugu dambeeya.
Sannadkii 2017, Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isla gaaray wareeggii saddexaad ka hor inta Xasan Sheekh uusan qiran in laga adkaaday.
Haddii aan musharraxna helin codadka aqlabiyadda ah ee wareegga koowaad, doorashada ayaa lagu celin doonaa, waxaana tartanka ka hari doona musharraxiinta aan helin 20 cod iyo wax ka badan.
Haddii qofna uusan helin tirada codadka loo baahan yahay, tartanka wuxuu geli karaa wareegga saddexaad, waana kan ugu dambeeya oo waxaa guuleysan kara musharraxa ugu cododka badan.
Magacyada musharraxiinta Madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya?
Cabdullaahi Cali Xasan
Jamaal Ibraahim Cabdi
Cadow Aali Gees
Maxamed Cabdiraxmaan Siriin
Cumar Cabduqaadir Axmed
Jibriil Ibraahim Cabdulle
Nucmaan Sheekh Tuurre
Ayuu yidhi Ciise Maxamuud
Axmed Geele Xaaf
Mahad Axmed Diiriye
Cabdiriim Xuseen Guuleed
Ismaan Xasan Wehliye
Ayuu yidhi Cabdullaahi Deni
Maxamed Amiin Faarax
Maxamed Cabdi Kuusow
Bashiir Xaaji Cali
Ridwaan Xirsi Maxamed
Fowsiya Yuusuf Aadan
Mukhtaar Maxamed Siciid
Cabduqaadir Sheekh Cali Baqdaadi
Sakariye Maxamuud Xaaji
Dr Xuseen Cabdi Nuunow
Cabdinuur Sheekh Maxamed
Abuukar Aadan Cade